OLCreate: Am I ready to beadistance learner - Myanmar ရည်ညွှန်းစာအုပ်များ
/ ► အဝေးမှသင်ယူသူတစ်ဦးဖြစ်ဖို့ အသင့်ဖြစ်ပြီလား။
/ ► ရည်ညွှန်းစာအုပ်များ
Expandအဆင့် ၁ လေ့လာသင်ယူဖို့ အချိန်ဘယ်လိုရမလဲ
အဆင့် ၁ လေ့လာသင်ယူဖို့ အချိန်ဘယ်လိုရမလဲ
Expandအဆင့် ၂ လေ့လာသင်ယူဖို့ ကိုယ့်မှာသင့်တော်တဲ့ ကျွမ်းကျင်မှုတွေရှိသလား
အဆင့် ၂ လေ့လာသင်ယူဖို့ ကိုယ့်မှာသင့်တော်တဲ့ ကျွမ်းကျင်မှုတွေရှိသလား
Expandအဆင့် ၃ အဝေးမှသင်ယူသူတစ်ဦးဖြစ်ဖို့ ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာကျွမ်းကျင်မှု ရှိနေပြီလား
အဆင့် ၃ အဝေးမှသင်ယူသူတစ်ဦးဖြစ်ဖို့ ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာကျွမ်းကျင်မှု ရှိနေပြီလား
Expandအဆင့် ၄ လေ့လာသင်ယူဖို့ အသင့်ဖြစ်ပြီလား
အဆင့် ၄ လေ့လာသင်ယူဖို့ အသင့်ဖြစ်ပြီလား
Expandအဆင့် ၅ စစ်ဆေးအကဲဖြတ်မှုက မိမိရဲ့ သင်ယူမှုအပေါ် ဘယ်လိုအထောက်အပံ့ဖြစ်စေမလဲ ဆိုတာကို နားလည်ပါသလား
အဆင့် ၅ စစ်ဆေးအကဲဖြတ်မှုက မိမိရဲ့ သင်ယူမှုအပေါ် ဘယ်လိုအထောက်အပံ့ဖြစ်စေမလဲ ဆိုတာကို နားလည်ပါသလား
Expandအဆင့် ၆ မိမိကိုယ်ကိုယ် စစ်ဆေးအကဲဖြတ်သည့် လုပ်ဆောင်မှု
အဆင့် ၆ မိမိကိုယ်ကိုယ် စစ်ဆေးအကဲဖြတ်သည့် လုပ်ဆောင်မှု
မိမိကိုယ်ကိုယ် စစ်ဆေးအကဲဖြတ်မှု မေးခွန်းလွှ
Kolb, D.A. (၁၉၈၄) အတွေ့အကြုံကိုအခြေခံသောသင်ယူမှု: သင်ယူမှုနှင့်ဖွံ့ဖြိုးမှုတို့၏ အရင်းအမြစ်ဖြစ်သည့် အတွေ့အကြုံ Englewood Cliffs, NJ, Prentice-Hall.
Rosewell, J. (၂၀၀၄) Living with the Net:တွင်ပါရှိသော‘သင်ယူမှုပုံစံများ’ သင့်ဘဝအရည်အသွေး မြှင့်တင်ဖို့ ကွန်ပျူတာအသုံးပြုခြင်း, Milton Keynes, The Open University.